ခုမှ လူယဉ်ကျေး လာလုပ်နေလို. မရတော.ဘူးလေ....... | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
ခုမှ လူယဉ်ကျေး လာလုပ်နေလို. မရတော.ဘူးလေ.......
ထူဖောင်ဒေးရှင်းနာယက ဦးတေဇက အခုလို့ မျိုး ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်တွေ ၀ယ်စီးပြီမှ ဒီစကားမျိုး သူမို့ ပြောထွက်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနေရာတော်တော်များများက တောင်တွေဆို တောင်ကတုံးဖြစ်နေယုံတင်မကဘူး။ ကတုံးကမှ ငုတ်လေးတွေ ကျန်သေးတယ်။ အခုဟာက ကိုရင်ကတုံး ဒက်ပေါက် သလို့မျိုး ပွေးပေါက် သလို့မျိုး ဘာအမွေးမှ မပေါက်တော့ သလို့မျိုးကို ပျောက်ရှင်းနေတာ။
''ကျွန်တော် သစ်ပင် တွေ အများကြီးခုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လဲ အခုအချိန်မှာ ပြန် လည်ပေးဆပ် ရပါမယ်။ အဓိက လုပ်မှာတွေက ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါး တဲ့ နယ်စပ် ဒေသ တွေမှာ လိုအပ် နေတဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို အားဖြည့် လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်''။သူပြောပုံက ဘာနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူနေလည်း ဆိုတော့
“ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် မိန်းကလေးတွေကို ကူးစက်ရောဂါတွေရအောင် အတင်းအဓမ္မ လုပ်ခဲ့ပါတယ်.. ပြန်လည်ပေးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ခုချိန်ကစပြီး အေအာတီဆေးတွေနဲ့ ကွန်ဒွန်တွေ ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးသွားတော့မှာပါ.” ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတာပေ့ါ။